AMERICAN BANDOGGE MASTIFF DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
American Bandogge Mastiff Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Mr. Vegas the Bandogge Mastiff oo 4 jir ah— 'Mudane. Vegas waa saaxiibkeyga ugu fiican. Isagu waa dhab ahaan waxa uu yahay Bandogge Mareykan ah: daacad, adeecid iyo ilaalin leh dareenka eyga ilaaliyaha ah. Wuxuu ku guuleystay kaalinta koowaad ee fasalka Bully Breed ee Bully Palooza Dog Show bishii Maarso 2012. Wuxuu soo saaray farac qurux badan. Aad ayaan ugu hanweynahay isaga. Noocyadiisa waa: miisaanka 115 rodol oo muruq saafi ah iyo 21 inji oo meesha u engeg ah. Isagu waa nin orod badan oo isboorti ah.
American Bulldog x Mastiff = Mareykan Masti-Bull
American Bulldog x Mastiff = Mareykan Mastiff
Ereyga 'Bandogge' waa magaca guud ee nooc kasta oo Bulldog ah oo loo yaqaan 'Mastiff'. Bandogge wuxuu leeyahay muruq aad u caan ah iyo ciqaab siinaysa eeyga muuqaal aad u fudud oo fudud. Intooda badani waa madow madow laakiin kuwa kale midabada waxaa ka mid ah madow, buluug, casaan iyo caws.
Bandogge waa ey aad u caqli badan. Waa kalsooni badan oo deggen. Sida Mastiffyada oo dhan, waa inay lahaadaan milkiileyaal awood u leh inay sii joogaan xukuma eeyaha dushooda. Badanaa laguma taliyo inay yihiin xulasho wanaagsan oo loogu talagalay milkiilayaasha eyda markii ugu horeysay, sababtoo ah waxay u baahan yihiin qof si dhab ah u fahma dareen canine iyo sida loo sameeyo si habboon ula xiriir maxay tahay waxaad ka rabtaa isaga. In kasta oo aan loo barbaarin sida eeyaha la dagaallamaya, haddii ay la joogaan milkiile dadban oo aan garanaynin sida loola xiriiro gardarrada lama aqbali karo, waxay noqon karaan eey dagaal badan. Dadka qaar, gaar ahaan kuwa ku teedsan Xeebta Bari, waxay wali u isticmaalaan eeygan eey dagaallamaya. Nasiib wanaag, waxaa jira dad badan oo dad ah oo eydaas u dhalaya si loo ilaaliyo marka loo eego dagaalka. Sida eey ilaalin ah, iyagu waa guud ahaan, heer sare. Waxay leeyihiin heshiis weyn oo wadid ah waana kuwo la kala qaadi karo. Cilladaha kaliya ee dabeecadda u leh shaqada ilaalinta ayaa ah iyaga oo aan dooneyn inay qabtaan qeybta 'jilif' ee 'jilifta iyo xajinta.' Maaddaama ay ku dhasheen soo saarista la dagaallanka, eeyaha badankood ee ka soo jeeda qowmiyadan ayaan u ciyi karin digniin ahaan tani caadi ahaan waa hawl adag. Bandogge-ka Mareykanka waa nooc jecel feejignaanta kuna kobca hoggaaminta. Haddii aadan ahayn eeygan 100% hogaamiyaha xirmada iyo / ama haddii aadan bixin wax kugu filan jimicsi maskaxeed iyo mid jireed waxay noqon doontaa mid aad u xanaaqsan marka keligaa la tago oo ay adkaan doonto in la xakameeyo. In kasta oo ay ku faraxsan yihiin in ay helaan wax dareen ah oo ay si farxad leh u aqbalaan wax kasta oo aad siiso, waxay gabi ahaanba u baahan yihiin milkiile u muujiya awood iyaga ka sarraysa. Waxay doorbidaan inay lajiraan milkiilayaashooda kuna noolaadaan inay ka farxiyaan oo ilaaliyaan, jeclaadaan qoysaskooda iyo ilaalintooda aaggooda. Bandogges waxay la jaan qaadi karaan xayawaannada kale haddii lala korsado iyaga, oo ay ku jiraan kittens, bisado iyo eeyo kale, laakiin waxay ku noqon karaan kuwo dagaal ku ah xayawaanada aan hore loo arag bulsho leh. Waxay ilaalin doonaan naftooda iyo qoysaskooda ilaa dhamaadka. Isku kalsoon oo aad u adeec badan, waxay ku fiican yihiin carruurta. Bandogges waxay umuuqdaan inay leeyihiin dareen goorma ay jilicsan yihiin. Iyagu waa xubno qoys oo aad u fiican sidoo kale an ku soo xadgudbay riyo xun. Waxaa la sheegay inay yihiin 'Nabadoonka Aamusan.' Noocan ayaa laga yaabaa inuu hoos u dhaco oo caajis noqdo.
Miisaanka: Ragga 100 -140 rodol (45 - 63 kg)
Miisaanka: Dumarka qiyaastii 85 rodol (38 kg) iyo wixii ka sareeya.
Dhererka: Ragga 25 - 29 inji (63 - 73 cm) Dheddigga waxay u muuqdaan inay ka yar yihiin.
isbaanish khafiif ah oo lagu qasay wax-soo-saarka dahabka
Baandhooyinka waxay ku fiicnaan doonaan aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Iyagu gudaha waxoogaa kama hawl galaan oo deyr yar ayaa qaban doona. Noocani wuxuu jecel yahay inuu la joogo milkiilahiisa mana ku raaxeysan doono nolosha qolka.
Bandogges-ka Mareykanka wuxuu u baahan yahay jimicsi weyn.
Qiyaastii 10 sano.
Eydan waaweyn, eeyaha timaha gaaban ayaa fudud inay xanaaneeyaan. Ka qaad timo dabacsan, buraash caag ah. Noocani waa celcelis daadiya.
Bandogges-ka Mareykanka ma ahan eeyo saafi ah sida aan ku garaneyno ereyga 'nadiifsan'. Abtirsiintoodu waa Godka Dibida Maraykanka iyo Neapolitan Mastiff . Waxaa jira jiingado qaar oo soo saara Bandogges si guul leh jiilal badan, iyadoon dhiig lagu darin noocyada kale, waxayna heleen nooc isku mid ah. Dabayaaqadii 1960s dhakhtar xoolaha oo lagu magacaabo Swinford ayaa bilaabay barnaamij taranta oo ugu dambayntii soo saaray eeyaha ugu weyn ee ilaalinta oo dhan. In kasta oo kuwa ka ganacsada ee 'Bandogges' maanta aysan ku raacsanayn waxa kaliya ee taranku galay Swinford qorshihiisii ​​taranka asalka ahaa, tanaasulka guud ayaa ah inuu ahaa 50% American Pit Bull Terrier iyo 50% aad u ballaaran molosser . Habka ugu caansan ee loo shaqaaleeyo soo saarista Bandogge waa in laga gudbo ciyaar wanaagsan oo lab ah oo Mareykan ah oo loo yaqaan 'Pit Bull Terrier' oo leh haween weyn oo xoog leh oo Naapolitan Mastiff ah. Hab kale oo xoogaa loo isticmaalo taranka Bandogges ayaa ah in laga tallaabo an Ingiriisi Mastiff leh Godka Dibida Maraykanka . Naadiga isku dhafan ee Canine-ka Mareykanka ayaa aqoonsan Bulldog Mareykan ah la tallaabay Mastiff oo ah Bandogge Mareykan ah. Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Naqshadeeyaha ayaa aqoonsan Bulldog Mareykan ah la tallaabay Mastiff sidii Masti-Bullkii Mareykanka. Sidoo kale, iskutallaab la mid ah ayaa ah Teri Bull Terrier iyo Bullmastiff iskutallaab, hase yeeshe iskutallaabtaan looma yeero 'Bandogge', laakiin waxaa loo yaqaan 'Pit Bullmastiff'. Magaca Bandog waxaa ka adeegsan jiray ingiriisigii hore Saxansaxo wuxuuna ka yimid erayga Banda, oo ah eray saxan u ah silsilad. Waxay ahayd caado caadi ah in eyga maalintii la xidho oo la sii daayo habeenki si ay ugu suurtagasho inuu guto waajibaadkiisa waardiye.
Sida laga soo xigtay ACHC - American Bulldog x Mastiff = American Bandogge
Sida laga soo xigtay DDKC - American Bulldog x Mastiff = American Masti-Bull
Marka loo eego IDCR - American Bulldog x Mastiff = MastiBull
Marka loo eego IDCR - American Pit Bull Terrier x Mastiff = American Bandogge Mastiff
Sida laga soo xigtay DBR - American Bulldog x Mastiff = American Mastiff
'Sawirka waa Savant's Cairo, waa 4 jir Bandog ah. Isagu waa eeyo qunyar-socod doofaarro ah oo iskutallaabta oo ka baxsan Queensland Australia oo ku fiican ugaarsiga doofaarka iyo isboortiga ilaalinta shakhsi ahaaneed. Isagu waa dhab u tuurayaa Neapolitan Mastiff shaqeynaya. Isagu waa ugaarsi aad u badan oo la wado Mastiff, oo leh dareemayaal xoog leh iyo darawallo difaac oo xoog leh. Isagu waa mid bulsheed, deggan, iyo eey aad loo tartami karo. Wuxuu fadhiyaa 28.5 ”iyo 120lbs, si layaab leh ayuu u dhaqsaha badan yahay isla markaana cagihiisa ku socda. Si wanaagsan ayuu wax u soo saaraa waana aasaaska ragga ee SavantK9. ' —Xuruuf SavantK9
Savant’s Cairo the American Bandogge Mastiff oo 4 jir ah kuna tababbaranaya tababarka ilaalinta — Xuquuqda leh ee SavantK9
Radley ninka labiska ah ee American Bandogge ee 12 toddobaad aabbe waa Mastiff hooyaduna waa Bulldog Mareykan ah.
macluumaadka eyga buur buur
Diesel the American Bandogge markii uu jiray 2 sano
Mudane Yanyeroo the Olde Ingiriis Bulldog (Hermes Bloodlines) iyo Dogue de Bourdeaux 'Mastiff Faransiis' (Riverbend Bloodlines) waxay isku darsamaan 10 bilood jir
Eeg tusaalooyin badan oo ah Bandogge Mastiff Mareykan ah
Bandogge Mastiff American Sawirro 1
Bandogge Mastiff American Sawirro 2
Bandogge Mastiff American Sawirro 3
shar pei iyo qas god
yorkshire terrier qasan chihuahua
american eskimo sheltie mix for sale
isku darka 'col terrier border' mix collie
imisa westies baa culeys ah